भोजपुर घटना: मृतक राईकी पत्नीले रुँदै सरकारलाई गरिन् यस्तो आग्रह – Etajakhabar
बिबिसी – मृतक निरकुमार राईकी पत्नी इन्द्रकला राईले आफ्ना पति आफूहरूलाई भेट्न बिहान पाँच बजेतिर डेरामा आएको र करिब एक घन्टापछि गएको बताइन्। बीबीसीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, “त्यसको एक घन्टापछि एकजना दिदीले बोलाउनु भयो। म सानो बच्चा लिएर त्यता जाँदै थिएँ, प्रहरीले बाटो बन्द गरेका थिए। के भयो भनेर सोध्दा प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तासँग भिडन्त भएको र मान्छेहरू मारिएको बताए।”
“त्यसपछि ती दिदी कहाँ पुग्दा यो मान्छे चिन्छ्यौं भनेर अनुहार घोप्टो परिरहेको मान्छेको फोटो देखाइन्। फोटोमा रगताम्य देखिन्छ। तर घटनास्थलमा रगत देखिन। पानी परिरहेको थियो।” उनले घटना कसरी भयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको तर फोटोमा हात बाँधिएको देखेको भन्दै उनले समातेर हत्या गरिएको हो कि भन्ने शङ्का आफूलाई लागेको बताइन्।
उनले भनिन्, “आफू त सानो बच्चा पढाएर बसेको मान्छे, केही जान्दिन, घटना के भएको हो भन्नेबारे अब छिनोफानो सरकार र पार्टीले गर्नुपर्छ।” त्यति भनेपछि उनको गला अवरूद्ध भयो। उनले रुँदै सरकारलाई आफ्नो केही आग्रह रहेको सुनाइन्। “म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आइन्दा यस्तो खालको घटना नहोस्, आखिर मर्ने र मार्ने जो भए पनि दुबै जनाको मृत्यु भयो। मर्ने नेपाली दाजुभाई नै हुन्। सरकारले यस्तो काम गर्नु भएन। आज यो घटना भयो भोलि अर्को होला, सरकारले के गर्न खोजेको? विशेष गरेर सरकारले कुरा बुझ्नु पर्‍यो।
उनले आफू पार्टीमा नलागेको सर्वसाधारण भएको र पार्टीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन्। उनी भन्दै गइन्: “जो मारिए उनीहरूबीच के दुश्मनी थियो र? त्यसैले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्‍यो। सोझा सिधा जनताले गरिखान पाउनु पर्छ। सरकारले पनि घमण्ड नगरोस्, पार्टीले पनि नगरोस्। आज म जुन दु:खमा छु, अब यस्तो दु:खमा अरू नपरुन् भन्न चाहन्छु।”
Posted on: Thursday, July 11, 2019 Time: 9:11:10